Bit By Bit - Ikamva - 7.2.1 I sokuxuba Readymades kwaye Custommades
Akukho iqhinga ecocekileyo Readymade engenguye qhinga ecocekileyo Custommade isebenzisa ngokupheleleyo izakhono kweminyaka yesuntswana. Kwixa elizayo siza ukwenza ibhastile.
Kwintshayelelo, mna lekisa isimbo Readymade of Marcel Duchamp kunye Custommade isimbo kaMichelangelo. Lo mahluko kwakhona itsala umahluko phakathi izazinzulu data, abo badla ukusebenza Readymades, kunye ntle, abo badla ukusebenza Custommades. Kwixa elizayo, Noko ke, silindele ukuba siya kubona engumxube ngenxa nganye kwezi ndlela ecocekileyo inomda. Abaphandi azondelele ukusebenzisa Readymades uza nzima kuba kukho Readymades ezininzi ezintle ehlabathini. Ngoko ke, abaphandi njengokujonga esi style ecocekileyo nokuba uza kubingelela ubulunga ngokusebenzisa Readymades ezimbi, okanye uza ndichitha ixesha elininzi elinde yokuchamela ogqibeleleyo. Abaphandi abafuna kuphela ukusebenzisa Custommades, kwelinye icala, baza kubingelela isikali. iindlela Hybrid Noko ke, ukudibanisa isikali olubangelwa Readymades engangena yepropu phakathi lemibuzo data evela Custommades.
Sabona imizekelo ezi ibhastile ngasinye kwizahluko ezine lokufumanisa. KwiSahluko 2, siye sabona indlela Google Flu ekwizinga idibanisa ukuba kusoloko-kwindlela data enkulu (imibuzo search) kunye nenkqubo womlinganiselo yemveli linokuba-based (i CDC system umkhuhlane yokucupha) ukuvelisa uqikelelo ngokukhawuleza (Ginsberg et al. 2009) . KwiSahluko 3, sabona indlela uStephen Ansolabehere and Eitan Hersh (2012) idibene yesiko-wenza uphando yedatha ngedatha zolawulo esele zenziwe ngurhulumente ukuze bafunde ngakumbi iimpawu abantu okunene ukuvota. KwiSahluko 4, sabona indlela experiments OPower oludibanisa iziseko womlinganiselo yombane esele zenziwe kunye nonyango yesiko-wenza ukuba ukufunda iziphumo izithethe zoluntu malunga nokuziphatha ngomlinganiselo omkhulu (Allcott 2015) . Okokugqibela, kwiSahluko 5 Ndinixelele, ngendlela Kenneth Benoit noogxa (2015) basebenzisa inkqubo isihlwele-nokhowudo isiko-eyenziwe iseti ukulungele-ezenziwe nkqubo yenziwe ngamaqela ezopolitiko ukwenzela ukudala data ukuba abaphandi Ungasebenzisa ukufunda kunyulo nemida iingxoxo-nkqubo.
Le mizekelo ezine onke abonisa ukuba isicwangciso enamandla elizayo kuya kuba ukuqhamisa imithombo yedatha ezinkulu, ezo ezingathathwanga uphando, ngolwazi olongezelelweyo olwenza ukuba efanelekileyo uphando (Groves 2011) . Nokuba iqala ngo Custommade okanye Readymade, le isimbo hybrid kunedinga ezinkulu iingxaki ezininzi zophando.